Jeneraly Randriamanalina Jean Christophe : “Hotohizana ny paikady sy ny fidinana ifotony” -
AccueilSongandinaJeneraly Randriamanalina Jean Christophe : “Hotohizana ny paikady sy ny fidinana ifotony”
Jeneraly Randriamanalina Jean Christophe : “Hotohizana ny paikady sy ny fidinana ifotony”
Araka ny nambaran’ny Jeneraly Randriamanalina Jean Christophe, sekreteram-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena miadidy ny Zandarimariam-pirenena vaovao, dia hotohizana hatrany ny toromarika sy ny paikady amin’ny alalan’ny fidinana ifotony izay efa napetraka tamin’ity taona 2018 ity. “Hidina daholo indray isika hijery ny any ifotony, ary hilaozana kely ny hoe raha vao tonga eto amin’ity toerana ity, dia hantsoina daholo ireo tompon’andraikitra lehibe hivory eto satria sady fandaniam-potoana izany no fandaniam-bola. Aleo ireo zandary hijanona any amin’ny faritra misy azy hanao ny asany indrindra amin’izao tsy fandriam-pahalemana somary mafimafy izao”, hoy ny fanamafisany. Tsy hohadinoina ao anatin’izany ny fanaovana vaindohan-draharaha hatrany ny ady amin’ny resaka kolikoly izay nahavitana ezaka betsaka sy isan’ny nampiavaka ny teo anivon’ity vondron-kery ity taorian’ny fanadiovana anatiny izay nataon’ny Jeneraly Randriamahavalisoa Girard, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena teo aloha .
Ho fanatanterahana izany, dia hotohizana ihany hoy izy ny “opération main propre”, indrindra fa any amin’ireo lalam-pirenena izay isan’ny tena mampitaraina ny olona sy ny mpamily. “Tsy faly fotsiny manome baiko na dia hatao aza hoe hananana fahatokisana ilay zandary fa tsy maintsy hisy ny fanaraha-maso ary ho henjana izany”, hoy ihany ny nambaran’ity jeneraly ity. Omaly moa no nanatanterahana ny famindram-pahefana teo aminy sy teo amin’ny jeneraly Randriamahavalisoa Girard, izay natao teny amin’ny toby Ramarolahy eny Betongolo. Nandritra io fotoana io , dia nanararaotra nisaotra sy nirary soa an’ity Sekreteram-panjakana taloha ity sy ny vadiny ny Jeneraly Randriamanalina Jean Christophe, tamin’ny anjara biriky goavana nentiny teo anivon’ity Vondron-kery ity. Marihina fa fanitelony tamin’ny famindram-pahefana, teo amin’izy mirahalahy ireo io notanterahana omaly io. Ankoatra ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa sy ireo manamboninahitra hafa, dia tonga nanome voninahitra ny lanonana ihany koa ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ny jeneraly Rasolofonirina Béni Xavier.
Nanokatra varavarana ny mpanao gazety
Isan’ny notsidihin’ny Jeneraly Randriamanalina Jean Christophe nandritra ny lahateniny io omaly io teny Betongolo ny fiaraha-miasa amin’ny mpanao gazety. Nanome baiko mazava ireo zandary tsy ankavanaka sy eo ambany fifehezany ity tompon’andraikitra ambony ity ny amin’ny hanomezana vaovao ireo mpiasan’ny orinasan-tserasera araka ny fanadihadiana nataon’ny teo anivon’ny Zandarimariam-pirenena. “Tsy maintsy omena ny mpanao gazety ny mangarahara, ary aleo ny marina no havoaka amin’ny olona fa tsy honohono”, hoy hatrany izy. Entina hanamorana izany moa, dia hozaraina amin’ireo mpampita vaovao ny laharan-taribin’ireo zandary rehetra manerana ny nosy.